Ivano-Frankovsk - Isifundo e-Ukraine. Ukrainian Ukwamukelwa Center
Ivano-Frankivsk, yilona dolobha Ivano-Frankivsk Oblast elisemandleni entshonalanga ye-Ukraine. It is a umuzi elincane elinabantu kalukhuni 205,000 abantu. Ubukhulu emzini kunezela charm yayo kuphela.
Ivano-Frankivsk waqala ukuphila njengoba inqaba elakhiwa ukuze avikele Commonwealth Polish-Lithuanian kusukela okuphindaphindiwe Tatar Ukuhlasela. Kwenqaba yimpumelelo futhi kwakungeyona eside ngaphambi komuzi-inqaba eqala ukukhuluphala ngaphansi ukuphepha zaleli izinqaba. It kukhulunywa ngaye okokuqala emlandweni 1662 lapho wanikezwa amalungelo eMagdeburg. Lo muzi waqhubeka ukusinda Tatar nje kuphela ukuhlaselwa kodwa nalabo wagxila phezu kwalo ahlaselako amabutho Turkish futhi Russian. I Renaissance kwaba sokukhula olunzulu kanye nokwakha kabusha, okuholela ke isigaba sokuba umuntu ngandlela-thile more dolobha. Eqinisweni ngazuza nick-igama 'Leopolis kancane’ - Leopolis kokuba igama lesiLatini elisho Lviv. Kwakubuye kube ngaleso sikhathi lapho Ivano-Frankivsk, Ukraine, waba isikhungo ebalulekile yesiko-Armenian.
Ngemva Poland lalihlukaniswe up in the 'ngodonga of Poland', Ivano-Frankivsk zase zingaphansi kokubusa Austrian phambi ewela ngaphansi esizindeni ezizimele zoMbuso Galicia kanye Lodomeria. 1919 Kwakuyisikhathi seziyaluyalu for Ivano-Frankivsk njengoba kwakunjalo ngendaba skirmishes eziningi Polish-Ukrainian. It ekugcineni bagcina njengoba Second Polish Republic, silokhu sikhonza njengamaphayona esikhathi enhlokodolobha Stanislawow Voivodship. Ekugcineni, e 1939 it wahlaselwa amabutho German nawaseSoviet futhi kwaba exhunywe Ukraine SSR. Iningi lamaJuda elalingaphansi wabulawa ngesikhathi kubusa amaNazi, okwakuwuphawu nkathi edabukisayo kakhulu emlandweni dolobha.
Ekugcineni, e 1962, igama lashintshwa Ivano-Frankivsk emva umlobi Ukraine Ivan Franko. The 1990 wakubona lokho ngenye yezinto izikhungo Ukraine ukuzimela ukunyakaza. Namuhla leli dolobha uyasukuma ngokuzazisa ilungelo layo siqu. It is a umuzi omuhle kokubili umlando enqobayo sad okuyinto Kuyathakazelisa ukuhlola kufanele isikhathi. Sicela uke uvakashe Ivano-Frankivsk ngesikhathi esizayo uma Ukraine futhi sithole lokho kufanele anikele for wena?
Isibuyekezo sokugcina:16 June 19